लाइक र भ्युजको लागि यी युवतीले जे गरिन… – My Blog
लाइक र भ्युजको लागि यी युवतीले जे गरिन…
No Comments on लाइक र भ्युजको लागि यी युवतीले जे गरिन…
टिकटक नेपालमा त्यति नै चर्चित र लोकप्रिय छ, जति फेसबुक । टिकटकको यो लोकप्रियता छ महिनायता झन् बढ्दो छ । केहि समय अघि‘लकडाउन’ले घरभित्रै रहँदा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि टिकटक समय गुजार्ने रमाइलो माध्यम पनि बन्यो । यसको लोकप्रियता त्यसयता चुलिएको छ ।
टिकटकका लागि भिडियो खिच्ने क्रममा एक युवतीको नौ तला माथिबाट ख’सेर निधन भएको छ । टर्कीकी २३ वर्षीय युवती बिभिन्न पो’जमा भिडियो बनाउने क्रममा एउटा अपार्टमेन्टको माथि बाट खस्दा उनको निधन भएको हो । कुब्राडो गान नाम गरेकी ती युवती इस्तानबुलस्थित भतिजाको अपार्टमेन्टबाट ख’सेकी हुन् । सूर्यास्त भइरहेको समयमा आकाशको लोभलाग्दो दृश्यलाई सेल्फीमार्फत कैद गर्ने क्रममा यो घटना भएको थियो ।
अर्पाटमेन्टबाट १ सय ६० फिट तल सडकमा झ’र्दा उनको घटना स्थ लमै निधन भएको थियो । अर्पाटमेन्टबाट घटना घट्नु अघि आफ्ना भतिजासँग विभिन्न पोजमा सेल्फी खिचेकी थिइन् । स्थानीय समयअनुसार साँझ साढे सात बजे अपार्टमेन्टको छा’नोको छे’उमा गएर तस्बिरका लागि पो’ज दिँदा यो घटना घटेको हो ।
पछिल्ला समयमा टिकटकमा भ्युज र लाइक बढाउन विभिन्न ख’ त’रनाक पो’जमा तस्बिर र भिडियो खिच्ने हो’ड प्रायः टिकटकप्रेमीमा देखिन्छ । अनौठो दृश्यलाई कैद गर्ने नाममा विभिन्न विकृति र वि’संग’ति दोहोरिएको वि’ज्ञहरुको भनाई छ । यसअघि पनि पूर्वी टर्कीमा टिकटक भिडियो खिच्दा एक युवकको ज्या न ग’एको थियो ।
टिकटकसँग कस्ता सूचना होलान्?
टिकटकको उत्पत्ति हामीले सुन्दै आएको अन्य सफल एपका कथाभन्दा अलि भिन्न छन्। केही साथीहरूले गजबको उपाय सोचेर सानो स्तरबाट स्थापना गरेको ठूलो कम्पनी होइन यो। खासमा टिकटकको जीवन तीन भिन्न एपबाट सुरु हुन्छ।
पहिलो, म्युजिकल.ली नामक एउटा अमेरिकी एप हो जसको स्थापना सन् २०१४ मा भएको थियो। त्यो लोकप्रिय पनि थियो। सन् २०१६ मा चिनियाँ विशाल प्रविधि कम्पनी बाइटडान्सले डुयीन नामक उस्तै सेवा सुरु गर्‍यो। त्यसले चीन र थाईल्यान्डमा एक वर्षभित्र दश करोड प्रयोगकर्ता पायो। बाइटडान्सलाई यो अझ ठूलो हुनसक्छ भन्ने लाग्यो। त्यसपछि सन् २०१८ मा उसले म्युलिकल.ली एप किन्यो र त्यसलाई बन्द गरिदियो। अनि थाल्यो टिकटकको विश्वव्यापी विस्तार।
टिकटकको सफलता श्रेय उसले गरेको सङ्गीतको उपयोग अनि अत्यन्तै शक्तिशाली एल्गोरिदमलाई जान्छ। त्यसले अन्य एपभन्दा निकै छिटो प्रयोगकर्ताको रुचि पहिल्याउँछ। अनि टिकटकको विशाल भण्डारबाट प्रयोगकर्ताहरूले कुन गीत वा फिल्म क्लिपमा आफ्नो भिडिओ बनाउने भनेर छनोट गर्न सहजै पाउँछन्। टिकटकमा कैयौँ समुदाय जन्मिएका छन् जसको समान रुचि पाइन्छ। कुनै खास वर्ग वा त्यत्ति ख्यालठट्टाका निम्ति सामग्री बनाउनेहरू छन्।
टिकटक र उसको भगिनी एप डुयीनको वृद्धि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। गत वर्ष जुलाईमै यी एप एक अर्ब पटक डाउनलोड भइसकेका थिए। तीमध्ये ५० करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता थिए। एक वर्षपश्चात् त्यो सङ्ख्या दुई अर्ब डाउनलोड र ८० करोड सक्रिय प्रयोगकर्तासम्म पुगेको छ।
टिकटकसँग खासमा कस्ता सूचना होलान् भन्नेबारे विवाद छ। यतिसम्म थाहा छ कि उसले कस्ता भिडिओ हेरिन्छन् र टिप्पणी गरिन्छन् भन्नेबारे जानकारी राख्छ, स्थानको जानकारी राख्छ, फोन मोडल र अपरेटिङ प्रणालीको जानकारी राख्छ तथा प्रयोगकर्ताले टाइप गर्दाको शैलीबारे जानकारी राख्छ।साथै कपी-पेस्ट क्लिपबोर्डबारे यसले जानकारी राख्ने बताइन्छ।
तर यस्तो जानकारी त बीबीसी न्यूज एप, लिङ्क्ड्इन, रेडिटसहित दर्जनौँ अन्य एपले पनि राख्छन्। उपलब्ध प्रमाणले टिकटकले फेसबुकजस्तै अन्य विशाल कम्पनीकै जस्तो जानकारी बटुल्ने गरेको देखाउँछन्।
तर उसले के पनि भनेको छ भने टिकटकबारे उत्पन्न आशङ्का हटाउन ऊ अभूतपूर्व स्तरको पारदर्शिताका निम्ति तयार छ। तर चिन्ता केवल उसले बटुल्ने डेटासँग मात्र जोडिएको छैन। के चिनियाँ सरकारले ती डेटा बाइटडान्ससँग आदेश दिएर लिन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
उस्तै चिन्ता ह्वावेई कम्पनीलाई लिएर पनि उब्जिएको थियो। तर दुवै कम्पनीले त्यस्तो आदेश आएमा नमान्ने बताएका छन्। साथै अर्को चिन्ता सेन्सरशिप तथा कुनै सार्वजनिक विषयलाई खास मोड दिनेगरी एपको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने छ।
← आमाले नवजात शिशुको ….. फलिन मकै बारीमा → आशाराम ट्रकमा श्रीमति, छोरी र छोरासँगै कतै जाँदै थिए अचानक नसोचेको यस्तो घटनाले परीवारनै तहसनहस बनाई दियो ! आफू छटपटाउँदै अस्पतालमा